स्थानीय समाचर – जागरण अनलाइन
October 15, 2019 २०७६ आश्विन २८, मंगलवार १९:०४ by जागरण मिडिया
Categories स्थानीय समाचर
पत्रकार प्रकाश चौधरीले महराको यौन प्रकरणमा वचाउ गर्दै भने–महरा सरलाई गलत आरोप लगाइयो, अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा नहान्न अनुरोध गर्दछु’
October 5, 2019 २०७६ आश्विन १८, शनिबार २१:०४ by जागरण मिडिया
घोराही, असोज १८ । नेकपा निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर दाङका कार्यवाहक अध्यक्ष हालका प्रेस संगठनका पत्रकार प्रकाश चौधरीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लगाईएको वलात्कारको आरोपमा वचाउ गरेका छन् ।
नेकपा घोराही उपमहानगर कमिटिको कार्यालय सदस्यसमेत रहेका चौधरीले फेसवुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्–महरा सरलाई गलत आरोप लगाउने शाहीलाई डेङ्गुले असर पारेको रहेछ जस्तो पो लाग्यो । डेङ्गुवालाई अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा नहान्न अनुरोध गर्दछु । टोकाई याद गर ।’
पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य पाण्डव प्रशाद शर्माले महराको यौन प्रकरणमा वचाउ गर्दै सभामुखमा पुनर्वहाल गरिनु पर्छ, एउटा मतदाताका हैसियतले हाम्रो माग हो यो’
October 5, 2019 २०७६ आश्विन १८, शनिबार २०:४७ by जागरण मिडिया
घोराही, असोज १८ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य पाण्डव प्रशाद शर्माले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लगाईएको वलात्कार अभियोग प्रकरणमा वचाउ गर्दै आरोप लगाउने महीलाले नै डिप्रेसनको औषधि खाने गरेको भनिसकेको अवस्थामा सभामुखमा पुनर्वहाल गरिनु पर्ने एउटा मतदाताका हैसियतले हाम्रो माग भएको दावि गरेका छन् ।
नेकपा घोराही १५ का वडा सचिव समेतसमेत रहेका शर्माले फेसवुकवाट भनेका छन्–आरोप लगाउने महिलाले नै मैले डिप्रेशनको औषधी खान्छु । मलाई कर्मचारी समायोजनमा सहयोग नगरेकाले रिसको झोकमा भनेको हुँ भनिसकेको भिडियो आइसकेको छ । अब तत्काल ती महिलालाई पक्राउ गरि मानसिक अस्पताल पुर्याउनु पर्छ । सभामुखज्युको राजिनामा फिर्ता हुन्छ या कानुनी प्रकृयाले मान्दैन भने पुनः संसद्मा सभामुखको निर्वाचन गराएर हुन्छ उहाँलाई सभामुखमा पुनर्वहाल गरिनु पर्छ । एउटा मतदाताका हैसियतले हाम्रो माग हो यो ।’
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔं आन्दोलनप्रति प्रेस संगठनको ऐक्यवद्धता
August 30, 2019 २०७६ भाद्र १३, शुक्रबार १९:३७ by जागरण मिडिया
दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानले थालेको आन्दोलनप्रति प्रेस संगठन नेपाल दाङले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ । प्रेस संगठनका जिल्ला कार्यदल सदस्यहरु जेएन सागर, प्रकाश चौधरी, पाण्डव शर्मा र प्रेमबहादुर राम्जाले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
August 24, 2019 २०७६ भाद्र ७, शनिबार २२:२८ by जागरण मिडिया
तेज गोविन्द क्षेत्री
पिउन छोडेको छु तिम्रो आँखाको नसा पिए देखि ।।
केही लेख्न छाडेको छु तिमीले बचन दिए देखि ।
बाँच्नु र मर्नु त ईश्वरको हातमा नै हुन्छ तर यहा।।
तिमीमा नै बिलिन हुदै छु म तिम्रै लागि जिए देखि।
परीयार सेवा समाजको केन्द्रिय सदस्यमा केशव नेपालि
August 3, 2019 २०७६ श्रावण १८, शनिबार २२:१० by जागरण मिडिया
घोराही । परीयार सेवा समाजको केन्द्रिय सदस्यमा केशव नेपालि चयन भएका छन् । नेपालि परीयार सेवा समाज दाङका अध्यक्ष पनि हुन् । परीयार सेवा समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष डि.वि. परीयारले नेपालिलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । परीयारद्वारा हस्ताक्षरीत मनोनयन सम्वन्धि पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरीएको छ ।
हिराचन्द्र केसिलाई सुन ब्यापारी भन्दै तुलसिपुरका गणेश आचार्यले दिपक गिरीलाई अवैध क्रशर ब्यापारीको आरोप लगाए
June 29, 2019 २०७६ असार १४, शनिबार १२:०२ by जागरण मिडिया
तुलसिपुर, असार १४ । तुलसिपुरका गणेश आचार्यले काग्रेस नेता दिपक गिरीमाथि अवैध क्रशर ब्यापारीको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । केही दिन अगाडि आफ्नो चुनावि हारको विषयको प्रसंगमा एउटा युटुव च्यानलसंगको अन्तरवार्तामा गिरीले तत्कालिन एमालेवाट उम्मेद्वार बनेर चुनावमा विजय भएका हिराचन्द्र केसिलाई आफुलाई कुनै राजनितिज्ञ भन्दा पनि एमाले समर्थित सुन ब्यापारीले हराएको आरोप लगाएका थिए ।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ क्षेत्र नम्बर ३ मा अरु कोही उठ्न नमानेको चर्चा गर्दै आफुलाई सुन ब्यापारीले चुनावमा हराएको बताएका थिए । केसिको वचाउमा तुलसिपुरका आचार्यले भनेका छन्–‘काँग्रेस नेता दिपक गिरीले खोइ कताको अन्तर्वार्तामा आफुलाई एमालेको सुन व्यापारीले हराएको भने रे । दिपक गिरीलाई हेक्का रह‍ोस्, कि तपाइँलाई हराउने एमाले नेता हिराचन्द्र केसी बैध सुन व्यापारी हुन् । तर,तपाईं अबैध क्रसर व्यापारी हो । तपाईंको क्रसर मापदण्ड विपरीत संचालन भइरहेको छ ।
यस्ता कानुन मिच्ने बदमाश नेताले ठुला कुरा नगरे हुन्छ ।’ यस वारेमा गिरीको प्रतिक्रीया लिन खोज्दा आफु कुनै पनि अवैध कार्यमा संलग्न नरहेको र गलत कुराहरु लेखेर अफवाह फैलाउन खोजेको भन्दै आफुमाथि लगाएको आरोपको पुष्ट्रि गर्न पनि चुनौति दिएका छन् । गिरीले सांसद हिराचन्द्र केसिमाथि लगाएको आरोपको विषयमा स्वयम केसिसंग बुझ्न खोज्दा उनको मोवाइल स्विच अफ रहेको छ । आचार्य तत्कालिन एमाले समर्थीत पत्रकारहरुको संगठन हालको प्रेस संगठन नेपाला(प्रेस चौतारी नेपालका) सदस्य पनि हुन् ।
June 21, 2019 २०७६ असार ६, शुक्रबार २०:४७ by जागरण मिडिया
– गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा ‘गीत तिम्रो’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । पुरुषोत्तम न्यौपानेको सँगीत रहेको गीत रिकेश गुरुंङले एरेन्ज गरेका हुन् । यस्तै गीतको भिडियोमा नायक आयान बज्राचार्य र मोडल रिचा थापाको अभिनय रहेको छ । सञ्चारकर्मी सविन प्रियासनको शब्द रहेको प्रियासन एल्वमको उक्त गीत गोदाबरीमा छायांकन गरिएको हो ।
प्रिन्सपन कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको उक्त भिडियो उत्सब दाहालले खिचेका छन् हुने भिडियो नवीन निरौलाले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोको मेकिङ चलचित्रको शैलीमा छ । उत्कृष्ट लोकेशन र मेकिङले गर्दा दर्शकले भिडियोबाट पनि थप मनोरञ्जन लिन सक्नेमा रचनाकार प्रियासन आशावादी छन् ।‘इतिहास’, ‘कालापानी’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका नायक आयान पुनः अभिनयमा जम्ने सोँच सहित फर्किएका छन् । नायक आयनले अभिनय गरेका अन्य गीतहरु पनि केही समयमा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । लामो समय देखि अभिनयमा क्रियाशिल रिचाको पनि हालसम्म दर्जनौ म्यूजिक भिडियो आइसकेका छन् भने उनले अभिनय गरेको लभ्यु हमेसा चलचित्र पनि पर्दशनको तयारीमा छ ।
June 21, 2019 २०७६ असार ६, शुक्रबार १९:२३ by जागरण मिडिया
June 18, 2019 २०७६ असार ३, मंगलवार २२:४४ by जागरण मिडिया
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन तत्काल गर्न निर्देशन
June 15, 2019 २०७६ जेष्ठ ३२, शनिबार २२:१८ by जागरण मिडिया
बुटवल । प्रदेश पाँच संसदको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले लोकसेवा सम्वन्धी कानुन बनिसकेको अवस्थामा तत्काल आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माका अनुसार बैठकले प्रदेश निजामति सेवा विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रदेशमा रहेका जेलहरुको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा जेलहरुमा कैदीवन्दीहरु राख्ने क्षमता भन्दा बढी रहेको तथा भौतिक संरचना पनि कमजोर रहेको कुरा उठेको थियो ।
बैठकले जेलहरुको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै बैठकले बुटवल १ मा श्री ३ बडामहारानीका नाममा रहेको जग्गामा वसेका १६ परिवारहरुको झुपडीमा डोजर लगाएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ । त्यहाबाट विस्थापित भएकाहरुको वैकल्पिक ब्यवस्थाका लागि सरकारसग आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेन्द्र हमाल, सरस्वति गौतम, भगवति भण्डारी, भुवनेश्वर चौधरीले विभिन्न विषयमा धारणा राखेका थिए । लोक सेवाको बिद्येयक २ नम्वर प्रदेशमा व्यापक विवाद भएको थियो ।
मानव तस्करीका कथा : पैसा कमाउने आसमा आपराधिक समूहको चंगुलमा
June 15, 2019 २०७६ जेष्ठ ३२, शनिबार २१:५२ by जागरण मिडिया
पछिल्लो समय नेपाल मानव तस्करीमा विश्वकै प्रमुख स्रोत बनिसकेको छ । छिमेकी देश हुँदै अफ्रिका तथा अमेरिकासम्म नेपाली युवायुवतीको तस्करी हुने गरेको छ । राम्रो कमाइ हुने आसमा तस्करको पन्जामा परेका थुपै्र नेपाली विदेशी जेलमा परेका छन् भने केहीको मृत्युसमेत भएको छ । तर, अवैध बाटो हुँदै विदेश पु¥याएर ठगीमा परेका, लुटिएका र मृत्यु भएकाको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । कसरी विदेशी भूमिमा नेपाली नागरिक ठगिएका छन् ? कुन बाटो हुँदै कसरी लगिन्छ ? भन्ने विषयमा नवराज मैनालीको रिपोर्ट :
अमेरिका जाने सपनामा दाङका एक युवकले ७५ लाख रुपैयाँ मात्र गुमाएनन्, १७ महिना जेलसमेत बिताउनुपरेको छ । मानव तस्करको पछि लागेर विभिन्न देश हुँदै अमेरिका पुगेका ती युवा अमेरिकामै १७ महिना जेल परेका हुन् । उनलाई अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य टोपबहादुर जिसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । प्रहरीका अनुसार अमेरिका लैजान सुरुमै उनीसँग २० लाख रुपैयाँ लिइएको थियो । पछि बाटोमा धम्क्याएर थप पैसा असुली गरिएको हो । भारतबाट युएई हुँदै उनलाई ब्राजिल लगिएको थियो । त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै उनलाई अमेरिका लगिएको हो ।
ब्राजिलबाट पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला र मेक्सिको हुँदै उनलाई अमेरिका लगिएको थियो । मेक्सिकोबाट अमेरिका छिरेलगत्तै पक्राउ परेका उनी त्यहाँ १७ महिना जेल परे । जेलबाट छुटेपछि नेपाल ‘डिपोर्ट’ गरिएको थियो । नेपाल फर्किएपछि उनले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दिएका थिए । उनलाई त्यसरी अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य जिसीलाई ब्युरोले पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिसीले हाल मृत्यु भइसकेका एक प्रदेश सभा सदस्यको निर्देशनमा पैसा लिएको बयान दिएका छन् । गिरोहका अन्य सदस्यहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो समूहले त्यसरी महिनौँसम्म लगाएर विभिन्न देश हुँदै युवाहरूलाई अमेरिका पठाउने गरेको थियो । केही वर्षयता अमेरिकी सीमामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ धेरैजना पक्राउ परेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि इटाली लैजाने भन्दै लिबिया पु-याएर १५ युवालाई अलपत्र बनाउने गिरोहका दुईजना पनि पक्राउ परेका छन् । मावन बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले राहुल गहतराज, तीर्थबहादुर विश्वकर्माजस्ता उपनाम भएका राहुल थापा र कमल भन्ने लोकमान राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सो समूहले प्रतिव्यक्ति पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ असुलेर उनीहरूलाई नयाँदिल्ली, दुबई हुँदै ट्युनिसियाबाट सिरिया पठाइएको थियो । त्यहाँबाट लिबिया पु-याएपछि उनीहरूको पासपोर्ट तथा नगदसमेत खोसिएको थियो । पछि त्यहाँ खटिएको नेपाली शान्ति सैनिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो ।
पक्राउ परेकामध्ये लोकमान विगतमा पनि मानव तस्करी मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति हुन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले २४ पुस ०७४ मा पक्राउ गरेको थियो । टर्कीमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । अदालतबाट १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेपछि उनले यही धन्दालाई निरन्तरता दिएका थिए । ‘भिजिट भिसामा विमानस्थलबाट मानव तस्करी गर्ने गिरोहका उनी नाइके भएको बुझिएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले काजकस्तान लैजाने भन्दै नेपालीहरूलाई झुक्याएर इरानको सहर कुर्दिस्तान पु-याएरसमेत अलपत्र बनाएका थिए । तीन युवकलाई त्यसरी कुर्दिस्तान पु-याइएको छ । त्यसमा संलग्न अमरबहादुर बगाले र मेनुका श्रेष्ठलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । आकर्षक जागिरको प्रलोभनमा लाखौँ असुलेर उनीहरूलाई कुर्दिस्तान पु-याइएको हो । इराक, लिबिया, सिरियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा समेत मानव तस्करी बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
क्यानडा पठाउने भन्दै दिल्ली लगेर मिर्गाैला निकाल्ने प्रयास
क्यानडा लैजाने भन्दै मानव तस्करीमा संलग्न एक गिरोहले एक युवक र उनका बुबा तथा मामालाई दिल्लीमा पु-याएर उनीहरूको पैसा लुटी मिर्गाैलासमेत निकाल्ने प्रयास गरेको छ । चार महिनापछि प्रहरीले सो गिरोहका एक सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ । नाम गोप्य राखिएका ती युवालाई गत ५ फेबु्रअरीमा भारतको नयाँदिल्ली लगिएको थियो । दिल्लीको होटेलमा राखेपछि क्यानडा जान २२ हजार अमेरिकी डलर देखाएपछि तुरुन्त क्यानडाको ‘इलेक्ट्रोनिन्स ट्राभल अथोराइजेसन’ ल्याउन सकिने भनेर ब्ल्याकमेल गरियो । भिसा आइसकेको भनेर उनलाई भ्रममा पारेर पैसा मगाउन लगाइएको थियो ।
भर्खर प्लस टू पास गरेका ती युवक क्यानडाको सपनामा मोहित भइसकेका थिए । त्यसकारण जसरी पनि पैसा खोज्न बुबासँग आग्रह गरे । छोरा क्यानडामा सेटल हुन्छ भन्ने सपनामा बुबाले आफन्तसँग ऋण गरेर २२ हजार डलरबराबरको पैसा जम्मा गरेका थिए । युवकका बाबु र मामा करिब २४ लाख पैसा बोकेर १२ फेब्रुअरीमा नयाँदिल्लीस्थित एयरपोर्टमा ओर्लिए ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो एसपी अनुपमशमशेर राणा भन्छन् ‘ वैदेशिक रोजगारीको आश्वासनमा खाडीदेखि अमेरिकी देशहरूसम्म तस्करी रोकिएको छैन । तस्करीमा परेकाहरूले उजुरी नदिने प्रवृत्ति छ । ’
सोही दिन बेलुका युवकको क्यानडाको फ्लाइट भनिएको थियो । गिरोहका व्यक्ति नै उनका बाबु र मामालाई लिन एयरपोर्ट गएका थिए । ट्याक्सीमा लिएर फर्किंदा उनीहरूले पैसा देखाउन भने । तर, शंका लागेर बाटोमा पैसा देखाएनन् । होटेलमा लगेर सुरुमा विभिन्न कुरा खान कर गरेको, तर आफूहरूले नमानेको उनीहरूले बताएका छन् । पैसा देखाएपछि गिरोहका सदस्य योगेश सापकोटाले युवकलाई विमानस्थल लिएर गएका थिए । बाबु र मामालाई होटेलमै राखिएको थियो ।
युवक विमानस्थलमा कुरिरहे । घन्टौँ कुरेपछि आफ्नो टिकट नै नक्कली भएको थाहा पाएपछि बिहान करिब चार बजे उनी बुबाहरू भएको होटेलमा फर्किए । जहाँ बुबा र मामालाई बेहोस अवस्थामा भेटे । उनीहरूलाई अस्पताल लिएर गए । त्यतिवेलासम्म उनीहरूको सबै पैसा लिएर गिरोहका व्यक्तिहरू फरार भइसकेका थिए । त्यसपछि मात्र उनीहरूले आफूहरू आपराधिक समूहको फन्दामा परेको थाहा पाए ।
बेहोस बनाएर आफूहरूको मिर्गाैलासमेत निकाल्ने प्रयास भएको उनीहरूले प्रहरीसँग बताएका छन् । गिरोहका सदस्य सापकोटा पक्राउ परेका छन् भने अन्य फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो गिरोहमा केही भारतीयहरूसमेत रहेको उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अनुपमशमशेर राणाले बताए । क्यानडाको पिआर नै मिलाइदिने भनेर उनलाई विश्वासमा पारी त्यसरी लुटिएको थियो । क्यानडमा भएका एक व्यक्तिसँग बारम्बार फोनमा कुरा गराएर उनलाई विश्वासमा पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
ब्युरो बन्यो नियमावली बनेन
मानव तस्करी तथा ओसारपसारका घटना बढेपछि सरकारले यससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि एसएसपीको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो गठन गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । तर, ब्युरोको नियमावली सरकारबाट पास नहुँदा अहिलेसम्म ब्युरोले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएको छैन । ब्युरोले उजुरी लिएर अनुसन्धान गरे पनि अन्य प्रहरी कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । गृह मन्त्रालयले ब्युरोको नियमावली मन्त्रिपरिषद् पठाएको महिनाैँ हुँदा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । नियमावली नहुँदा अनुसन्धानका काम प्रभावित भएको ब्युरोका अधिकारी बताउँछन् ।
न सहचारी न सन्धिमा हस्ताक्षर
मानव तस्करीमा नेपाल विश्वकै प्रमुख स्रोत मुलुक बनिसकेको छ । छिमेकी देशदेखि अफ्रिका तथा अमेरिकासम्म नेपाली युवायुवतीको ओसारपसार हुने गरेको छ । तर, नियन्त्रणका लागि सरकारबाट पर्याप्त पहल नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरैजसो नेपालीलाई भारत तथा युएईलाई ट्रान्जिट बनाएर बेचबिखन हुने गरेको छ । युएईलगायत देशमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रहरीले गरेको प्रस्ताव वर्षाैँसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसकारण प्रहरी परराष्ट्रका कर्मचारीमा भर पर्नुपरेको छ । तर, परराष्ट्रबाट पर्याप्त सहयोग र सक्रियता हुने गरेको छैन । अर्काेतर्फ मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रसंघको ‘पारलेमो प्रोटोकल’मा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन । इटालीको पारलेमोमा सन् २००० मा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि घोषणापत्र जारी भएको थियो ।
नयाँ पत्रिकावाट ।
इन्द्रेणी आइडल २ को उत्कृष्ट ५ प्रतियोगी छनौट
June 15, 2019 २०७६ जेष्ठ ३२, शनिबार १९:३२ by जागरण मिडिया
जेठ, ३२ । स्थानीय प्रतिभालाई पहिचान गरी सांगितिक क्षेत्रमा स्थापित गराउने र संगीत कलाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संचालित सांगितिक रियालिटी कार्यक्रम इन्द्रेणी आइडल २ को आज भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ५ प्रतियोगी गायन र प्रस्तुतिका आधारमा छनौटमा परेका छन् । साताको शनिबार दिउँसो इन्द्रेणी एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम इन्द्रेणी आइडल २ मा अघिल्लो साता छनौटमा परेकाहरु मध्येबाट आज उत्कृष्ट ५ छानिएका हुन् ।
२०७५ चैत्रबाट शुरु भएको प्रतियोगितामा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पचासौंको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न चरणका गराइएको प्रतियोगिताबाट अन्तिम पाँचसम्म पुग्न सफल भएका प्रतियोगीहरुमा सरिता बिक, अभिषेक बिक, किरण विक, एम्ब्रोस मगर र रिता घर्ती रहेका छन् । आज भएको प्रतियोगितामा जमुना मगर असफल भएकी आयोजकले जनाएको छ ।
गुठि किसानले वचाएको भन्दै गुठि विधेयकको पक्षमा उत्रिए वडा अध्यक्ष
June 14, 2019 २०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार २१:५४ by जागरण मिडिया
घोराही, जेठ ३१ । घोराही ७ का वडा अध्यक्ष खोपिराम चौधरीले गुठि किसानले वचाएको भन्दै गुठि विधेयकको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले फेसवुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्–गुठि किसानले वचाएका हुन्, त्यसैले गुठि विधेयक किसानलाई सम्मान गरेर आवस ।’
कान्छी आमाको दाहसंस्कार गर्दै गर्दा बगेर दाङमा एकको मृत्यु
May 13, 2019 २०७६ बैशाख ३०, सोमबार २१:३९ by जागरण मिडिया
३० वैशाख/ दाङमा आफ्नी कान्छी आमाको दाह सस्कार गर्न घाटमा पुगेका एक ब्यक्तिको नदिमा बगेर मृत्यु भएको छ ।
जण्डिस रोगका कारण मृत्यु भएकी लमही नगरपालिका वडा नं. ९ अमिलिया निवासी ६२ बर्षीया जयसरा घर्तीको दाहसंस्कारका लागि पुगेका राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ निवासी ५२ बर्षीय कर्णबहादुर घर्तीको सोमबार नदीमा बगेर मृत्यु भएको हो ।
लमही ९ स्थित राप्ती नदिमा दाह संस्कार पछि नुहाउँदै गर्दा नदीले बगाएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिनोद बिक्रम शाहले बताए ।
उनका अनुसार बिहान ११ बजे नदीले बगाएर बेपता भएका उनको दिउसो ३ बजेतिर ५० मिटर तल मृत अबस्थामा फेला परेका हुन् । उनको शवलाई पोष्ट मार्टमका लागि लमही अस्पतालमा लगिएको छ ।
April 27, 2019 २०७६ बैशाख १४, शनिबार २२:३९ by जागरण मिडिया
केहि समयमा नै एल्बम निकाल्ने तयारी गरेका प्रियासनलाई सगितमा पुरुषोत्तम न्यौपानेले साथ दिएका छन।
उनको पहिलो गितको एरेन्ज गोपाल रसाइलीले गरेका छन। उक्त गित सैघाली खबरको युटुब च्यानल बाट पहिलो पटक सार्बजनिक गरीएको छ।
प्रियासनले विशेषगरी उपन्यासहरु लेख्ने र पत्रकारिता गर्ने भएपनि पछिल्लो समयमा गीत समेत लेख्न थालेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष समेत रहेका प्रियासनले छिटैनै अन्य गीतहरु पनि बजारमा ल्याउने बताए ।
पहिलो म्युजिक भिडीयोको सबै छयाङकन सिन्धुलीमा गरीएको हो। मोडल बेबो आर्चाय,जय देवकोटाले अभिनय गरेको म्युजिक भिडीयोको निर्देशन रोजल थापाले गरेका हुन। रेड क्यामेरा ,ड्रोन लगायत अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर भिडीयो निर्माण गरीएको सबिन प्रियासनले जानकारी दिए।
यस्तो छ चलचित्र कालो वर्षको ट्रेलर
April 13, 2019 २०७५ चैत्र ३०, शनिबार १८:५३ by जागरण मिडिया
काठमाडौं। आगामी बैशाख १३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘कालो वर्ष’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको ट्रेलर आज युट्युव च्यानल भिरगो टिभि मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
लक्षु गौतमले निर्देशन गरेको चलचित्रमा ओकेश पनेरु, अनुपा खड्का र पवन भट्टराईको मुख्य भूमिका रहेको छ।
साथै चलचित्रमा सुरेन्द्र बुढाथोकी, रश्मी शाह, रबिन भुजेल, रश्मी भट्ट, अशोक पहरी, करन साउद, डिजे सन्दिप खत्री, दिनेश सापकोटा लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ।
जनता बैंकद्वारा स्थापना दिवसमा रक्तदान
April 6, 2019 २०७५ चैत्र २३, शनिबार २२:५१ by जागरण मिडिया
दाङ, २३ चैत्र | जनता बैंकले आज दाङ सहित देशभर १० औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । देशभर १ सय २८ शाखा स्थापना गर्न सफल बैंकले आज १० औँ स्थापना दिवस मनाएको हो । दाङमा बैंकको घोराही र तुलसीपुर शाखाले पनि संयुक्तरुपमा प्रभातफेरी तथा रक्तदान कार्यक्रम गरेर १० औँ स्थापना दिवस मनाएका छन् ।
बैंकले बिहान प्रभातफेरी गरेर शाखा तुलसीपुरमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको हो । रक्तदान कार्यक्रममा ४० जनाले रक्तदान गरेका छन् । बैंकका घोराही शाखा प्रवन्धक संजय बगाले, तुलसीपुर शाखा प्रवन्धक उमंग अधिकारी सहित कर्मचारी, विभिन्न बृद्धिजीवी, नागरिक समाज, व्यापारी लगायतले रक्तदान गरेका हुन् ।
यसैबीच बैंकले आज १० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यmक्रम अन्तगर्त एक जना विपन्न छात्रालाई छात्रबृद्धी प्रदान गरेको छ । बैंकले तुलुसीपुर उपमहानगरपालिका—१६ मा रहेको लक्ष्मी आधारभुत निमाविमा अध्ययनरत्त छात्रा यामकुमारी घर्तीलाई नगद पाँचहजार सहयोग गरेको हो ।
बैंकले दाङका २० जना स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने दाङमामात्रै करिब ४ हजार १ सय जना ग्राहक संख्या रहेको जनाएको छ ।
March 28, 2019 २०७५ चैत्र १४, बिहीबार २०:२६ by जागरण मिडिया
दाङ उवासंघका कार्यालय प्रमुख सुरज बुढाथोकि काग्रेसमा प्रवेश
March 19, 2019 २०७५ चैत्र ५, मंगलवार २०:२७ by जागरण मिडिया
घोराही, चैत ५ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका कार्यालय प्रमुख सुरज बुढाथोकि काग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफु काग्रेसमा प्रवेश गरेको बताएका हुन् । उनले फेसवुकमा भनेका छन्–‘आज देखी औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेको घोषणा गर्दछु ।’
दाङकाे एक निजि विद्यालयले पत्रकारका छोराछोरीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने घाेषणा
March 16, 2019 २०७५ चैत्र २, शनिबार २२:४३ by जागरण मिडिया
चैत २, दाङ ।दाङ तुलसीपुर ७ मा रहेको तुलसीपुर एकाडेमिले पत्रकारका छोराछोरीलाई पढाई शुल्क वाफत लिईने “फि”मा ५०% छुटको ब्यवस्था मिलाइएको बिद्यालय प्राचार्य भागवत भट्टराईले जानकारी दिए ।
बिद्यालयले यस्तो ब्यवस्था गरेपछि पत्रकारहरु खुसी हुँदै आफ्ना बालबालिकालाई तुलसीपुर एकाडेमिमै ल्याउने गरेको उनले बताए । आफू लामो समयदेखि पत्रकारिता र शिक्षा पेशा गरिरहेकाले सेवा भावले यस्तो ब्यबस्था गरेको प्राचार्य भट्टराईले बताए ।
तुलसीपुर एकाडेमि २०६७ सालमा स्थापना भएको हो र अहिले आधारभूत तह सम्म रहेको बिद्यालयले क्रमश कक्षा थप्दै लैजाने भट्टराईले बताए ।
मगर भेषभुषा प्रर्दशन आज, गृह जिल्ला दाङमा सभामुख महरा
March 16, 2019 २०७५ चैत्र २, शनिबार ०७:४२ by जागरण मिडिया
दाङ । मगर समुदायको भेषभुषा प्रर्दशनी आज हुने भएको छ ।मगरभाषा साहित्य तथा सांकृतिक प्रतिष्ठानको आयोजना मगर भेषभुषा प्रर्दशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा दाङ आउँन लागेका हुन ।
घोराही स्थित गणेश चित्रालयमा हुने भेषभुषा प्रर्दशनीको लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृतिमान पुनले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गर्नु हुने भएको छ ।
कार्यक्रम मगर,थारु,गरुङ, समुदायको आ–आफ्नै कला प्रर्दशन गरिने छ।भेषभुषा प्रर्दशनीमा सहभागी हुन दाङ, कपिलबस्तु,वुटवल, काठमाडौ लगाएतका विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागि हुने पुनले जानकारी दिनुभयो ।
March 15, 2019 २०७५ चैत्र १, शुक्रबार १९:४७ by जागरण मिडिया
March 10, 2019 २०७५ फाल्गुन २६, आईतवार २२:५० by जागरण मिडिया
घोराही, फागुन २६ ।घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ७ को आयोजनामा आइतबारदेखि हाउस वाईरिङ तालिम शुुरु भएको छ । वडाभित्र रहेका बिपन्न युवालाई सिप सिकाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
वडाको चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित कार्यक्रम अन्तरगत १५ जना युवालाई हाउस वाईरिङ सम्वन्धि तालिम दिन थालेको हो । यसैबीच, तालिमको आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरीले उद्घाटन गर्नुभयो । दुई महिनासम्म चल्ने तालिममा हाउस वाइरिङका लागी आवश्यक सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिने वडा सचिव चन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । तालिमको सहजकर्ता जुद्धबहादुर चौधरी रहनुभएको वडा कार्यालय सौडियारले जनाएको छ ।
March 9, 2019 २०७५ फाल्गुन २५, शनिबार १७:५२ by जागरण मिडिया
घोराही, फागुन ३० । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा संघमा आवद्ध वस्तुगत समिती विच हाजिरी जवाफ प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगीतामा गल्ला तथा किराना व्यवसायि समिती प्रथम, प्लाष्ट्रिक व्यवासायिक समिती द्धितीय र फेन्सी व्यवसायि समिती तृतीय भएका थिए । प्रतियोगीतामा ८ वटा विषयगत समितीहरुले भाग लिएका थिए । प्रतियोगीताका विजेताहरु लाई संघको साधारण सभामा पुरस्कृत गरीने कोषाध्यक्ष शुसिल पोख्रेलले जानकारी दिए । प्रतियोगीता उद्घाटन कार्यक्रम दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालको अध्यक्षता एवम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य धुव्रराज श्रेष्ठ (भारी)को प्रमुख आतिथ्यतामा एवम संघका संस्थापक अध्यक्ष तोरणध्वज श्रेष्ठको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएकोे थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस प्रकारको क्रियाकलापले व्यवसायिहरु लाई व्यवसायि गर्दा समेत सहयोग पु¥याउने बताएका थिए । कार्यक्रममा संघका पुर्व अध्यक्ष रामदयाल गुप्ता लगाएतकाले भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रमको वारेमा संघका उद्योग उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक वसन्त जोसी जानकारी गराएका थिए । संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष टंकसिह वुढाथोकीको स्वागत मन्तव्यवाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण संघका सचिव माया पोख्रेलले गरेकी थिइन । संघले आफनो साधारण सभाको अवसरमा विभिन्न प्रकारका प्रतियोगीता आयोजना गरेको जनाएको छ । शनिवार वाट कार्यक्रम सुरु भएका छन् । संघको साधारण सभा आउदो चैत ९ गते हुदै छ ।
तपस्या ट्रेडर्स विद्यालय टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिता-२०७५ को तयारी पुरा
March 4, 2019 २०७५ फाल्गुन २०, सोमबार २०:४६ by जागरण मिडिया
२०-फागुन / दाङको घोराहीमा आयोजना हुन थालेको ‘तपस्या ट्रेडर्स जिल्लास्तरिय विद्यालय टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिता-२०७५ को तयारी पुरा भएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न १२ वटा विद्यालयको सहभागिता रहने प्रतियोगीताको तयारी पुरा भएको आयोजक शान्ति निकेतन विद्यालयले जनाएको छ ।
शान्ति निकेतन विद्यालय घोराहीको आयोजना तथा क्रिकेट संघ दाङको प्राविधिक सहयोग एवं तपस्या ट्रेड्सको मुख्य प्रायोजनमा हुन थालेको ‘तपस्या ट्रेडर्स जिल्लास्तरिय विद्यालय टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिता-२०७५ को सह-प्रायोजकमा घोराही उपमहानगरपालिका वडानम्वर १५, ड्रिमल्याण्ड ट्रेडर्स घोराही दाङ र व्यवसायी सनत गिरी रहेका छन । त्यसैगरी प्रतियोगीताको प्रथम पुरस्कार घोराही उपमहानगरपालिका र दोस्रो पुरस्कार द् लोटस ट्रेनिङ सेन्टर घोराहीले प्रायोजन गरेको प्रतियोगीता संयोजक केशव अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतियोगीताको हस्पिटालिटी पार्टनरमा टी थ्री प्यालेस र फुड एण्ड रिफ्रेसमेन्ट पार्टनरमा मानाखासी सिने प्लेस घोराही रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतियोगीताका अन्य प्रायोजकमा सत्यवती पुस्तक पसल, दङाली माछापालन, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, एम.एस.अटो घोराही, दीयो गार्मेन्ट घोराही, कैलास रोका र बासुदेव शर्मा रहेका छन । विद्यालय स्तरमा क्रिकेटप्रति आकर्षण बढाउँदै क्रिकेटको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगीता संयोजक केशव अधिकारीले जानकारी दिए ।
विद्यालयस्तरिय क्रिकेट प्रतियोगीतामा जिल्लामै पहिलोपल्ट हार्ड बलको प्रयोग गरेर प्रतियोगीता सञ्चालन हुने भन्दै दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रदिप मजगैयाले यसै खेलबाट जिल्लाको जुनियर टिमको छनौट गर्ने जानकारी दिए । दाङ क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा खेल सञ्चालन हुने भन्दै अध्यक्ष मजगैयाले खेल नकआउटमा खेल खेलाइने जानकारी दिए । प्रतियोगितामा पहिलो हुने विजेता टिमले नगद रु. २५ हजार र दोस्रो हुने टिमले रु. १५ हजार पुरस्कार प्रदान गर्नेछन् ।
घोराही-१७ गुलरिया क्रिकेट मैदानमा आज बिहान ७ वजेदेखि सुरु हुने प्रतियोगीतामा जिल्लाको घोराही, तुलसीपुर, लमही र भालुवाङका १२ वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको छ । उद्घाटन खेल गोरखा बोर्डिङ स्कुल घोराही र आयोजक शान्ति निकेतन विद्यालय घोराहीका बीचमा हुने छ ।
फोटाे पत्रकार महासघको कोषाध्यक्ष बने दाङका रोशनमान श्रेष्ठ
March 1, 2019 २०७५ फाल्गुन १७, शुक्रबार १८:०७ by जागरण मिडिया
घोराही, फागुन १७ । नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर ५ को संयोजकमा मनाेज पाैडेल चयन हुनुभएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलमा शुक्रबार भएको महासंघको प्रदेशस्तरीय भेलाद्वारा पाैडेल संयोजकमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन ।
नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ध्रुव आले, उपाध्यक्ष सागर श्रेष्ठ, महासचिव हरि रेग्मीकाे उपस्थितिमा पाैडेल सर्वसम्मत चयन भएका हुन ।
सहसंयोजकमा सीपी खनाल चयन हुनुभएको छ भने सचिव कृष्ण दर्नाल, कोषाध्यक्षमा राेशनमान श्रेष्ठ ,सहसचिवमाशंकर खनाल र सदस्यहरुमा लक्ष्मण ढुंगाना,सागर रिजाल, रविन्द्र यादव, केशव राना, मीना ढकाल र खग प्रसाद चांपागाई चयन हुनुभएको छ ।
सातदिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिम सुरु
February 25, 2019 २०७५ फाल्गुन १३, सोमबार १८:४१ by जागरण मिडिया
तुलसीपुरमा सातदिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिम सुरु भएको छ । तुलसीपुर मिडिया प्रालिको आयोजना तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको तालिमको सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको हो ।
उक्त अवसरमा वडामा रहेका महिला तथा पुरुषहरुको आत्मविश्वास र क्षमता वृद्धि गर्नका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार शाहले बताए । अझै पनि सामाजमा खुलेर बोल्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजको विकास र स्तरोन्नतिका लागि पर्ने भएकाले यस्ता तालिमहरुको आवश्यकता पर्ने बताए ।
तालिम सञ्चालनको पहिलो दिन सहभागीहरुलाई उद्घोषणसम्बन्धी विभिन्न विषयमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव सुशील बस्नेतले प्रशिक्षण दिएका थिए । वडा अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार शाहको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको तालिमको सञ्चालन तुलसीपुर मिडिया प्रालिका निर्देशक गोपाल शर्मा भट्टराईले गरेका थिए ।
फागुन १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिमको पहिलोे दिन ४२ जना प्रशिक्षार्थीहरु सहभागी भएका थिए । आफूहरुलाई मध्यनजर गरी सञ्चालन गरिएको तालिमले थप आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा लिएको तालिममा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
प्रजातान्त्रीक विचार समाज दाङको दोस्रो जिल्ला अधिवेसन फागुन १८ गते
February 25, 2019 २०७५ फाल्गुन १३, सोमबार १७:४९ by जागरण मिडिया
घोराही, फागुन १३ । प्रजातान्त्रीक विचार समाज दाङको दोस्रो जिल्ला अधिवेसन फाल्गुन १८ गते घोराहीमा हुने भएको छ। प्रजातान्त्रीक विचार समाज दाङका अध्यक्ष कीशोर पोख्रेलको अध्यक्षता. एवं प्रदेश न ५का संयोजक शंकर दिवस मजगैयाको प्रमुख आतीथ्यमा सम्पन्न वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अधिवेसनलाइ संवोधन गर्न प्रजातान्त्रीक विचार समाजका केन्द«ीय अध्यक्ष डा केदार नरसिह केसी र राजनीतीक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल आउने प्रजातानत्रीक विचार समाज दाङका अध्यक्ष कीशोर पोख्रेलले जानकारी दिनुभएको छ।
February 22, 2019 २०७५ फाल्गुन १०, शुक्रबार ०७:४० by जागरण मिडिया
तुलसीपुर, १० फागुन । पञ्चमुखे शिव मन्दिर र अख्लेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माणका लागि सञ्चालन गरिएको सितलपुरमा जारी शिव महापुराणको बिहीबार समापन गरिएको छ ।
दाङको तुलसीपुर १२ शितलपुरमा माघ २७ गते देखि शुरु भएको महापुराणकाे अन्तिम दिन बिहीबार सबैभन्दा बढि तुलसीपुर १२ जस्पुरका तेज बहादुर बुढाथोकी परीवारले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैया दान गरेका छन । यस्तै, प्रदेश ५ का प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली बहादुर चौधरीले ५१ हजार रुपैया दान गरेको आयोजक समितिका सचिब लिलाधर डाँगीले जानकारी दिए ।
महायज्ञमा कुल नगद ७६ लाख ६९ हजार २४ रुपैया दान संकलन भएको सचिब डाँगीले जानकारी दिए । दाताबाट ५० लाख १९ हजार २४ रुपैया र विभिन्न वडाबाट २६ लाख ५२ हजार रुपैया संकलन भएको हो ।
मन्दिर निर्माणका लागि सञ्चालन गरिएको शिवपुराणको आयोजक समितिका संयोजक शक्ति कुमार शर्माको अध्यक्षतामा समापन भएको हो । समापन कार्यक्रमको सहजिकरण शुस्मा गिरी र देविराम कुसारीले गरेका थिए ।
Categories अर्थ, समाचार, स्थानीय समाचर